‘लिम्बु पहिचान’ पुस्तक सार्वजनिक- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — ‘लिम्बु पहिचान : मौलिक याक्थुङ पहिचानको खोजी’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । १२औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रश्नावलीमा समेटिएका जातीय पहिचानका विषयप्रति समुदायमा हुने गरेको अन्योललाई स्पष्ट पार्ने सामग्रीसहित पुस्तक प्रकाशनमा ल्याइएको जनाइएको छ ।
मुन्धुम एकेडेमीले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा १५ जना लेखकका लिम्बु (याक्थुङ) जाति र समग्र किरातबारे विविध पक्षमा लेखहरू समेटिएका छन् । उक्त पुस्तक डीबी आङबुङ, टेक लावती र ट|s सेलिङले सम्पादन गरेका हुन् ।
आगामी कात्तिक २५ गतेबाट मंसिर ९ गतेसम्म देशभरि एकैसाथ राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । जनगणनाको मुख्य प्रश्नावलीको व्यक्तिगत खण्डमा नाम, थर, लिंग, जात/जाति, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, दोस्रो भाषा र धर्म समेटिएको छ । आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट सार्वजनिक गरिएको पुस्तकमा सम्बन्धित समुदायमाझ हुने दुविधालाई स्पष्ट पार्ने सामग्री रहेको जनाइएको छ ।
जनसंख्याविद् बालकृष्ण माबुहाङ्ले ‘राष्ट्रिय जनगणना र आदिवासी जनजाति याक्थुङ (लिम्बु)को पहिचान’, नन्द कन्दङ्वाले ‘जनगणनाको राजनीति, लिम्बु आदिवासीमा विवाद र समाधानको उपाय’ शीर्षक लेख र केदार धिमालले ‘आदिवासी धिमाल जातिको पहिचान र जनगणना’ आलेख प्रस्तुत गरेका छन् । लिम्बु र धिमाल जातिबीच ऐतिहासिक रूपमा एकै दाजुभाइ थिए भने सांस्कृतिक समानता रहेको पाइन्छ ।
पुस्तकमा समेटिएका आलेखमध्ये अरुना लिम्बुले ‘लिम्बु जातिमा मातृसत्ता, लोक देवीदेवता र धर्म’, भगिराज इङनामले ‘ऐतिहासिक दस्तावेजमा याक्थुङ्, लिम्बु र किरात’ शीर्षमा लेखेका छन् । डा. चैतन्य सुब्बाले ‘याक्थुङ–लिम्बुहरूको युमा धर्म’, धमेन्द्र नेम्बाङले ‘बहुल रङ्गवादी दृष्टिकोणमा जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति’, दिलेन्द्र कुरुम्बाङले ‘मौलिक पहिचानको बहस’, डा. कमल तिगेलाले ‘आदिवासी लिम्बुको जाति, भाषा, धर्म र किरात धर्म’ शीर्षक आलेख रहेका छन् ।
यसैगरी खगेन्द्र माखिमले ‘पुरानो राज्यसत्ताको निरन्तरता कि परिवर्तन’, कृष्णविक्रम नेम्बाङले ‘प्राचीन किरात को हुन् र कुन सभ्यताबाट फैलिएका थिए ?’, लछामी शेर्मा पापोले ‘किरात धर्मको आत्मसमीक्षा’, मधुराज केरुङले ‘सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान र लिम्बु जातिको जागरण पथ’ विषयमा लेखेका छन् । यसैगरी टंक सेलिङको ‘मौलिक मुन्धुम र धर्ममा वैज्ञानिक अवधारणा’ र टेक लावतीको ‘लिम्बुवानमा विभिन्न धार्मिक पन्थहरूको उद्भव, द्वन्द्व र कारकतत्व’ शीर्षक लेख समेटिएका छन् ।
‘समाजमा एकपक्षीय ढंगले प्रस्तुत हुने बानी परेको छ,’ मुन्धुम एकेडेमीका अध्यक्ष तथा सम्पादक डीबी आङबुङले भने, ‘त्यसैले सबै पक्षलाई बहुपक्षीय ढंग र प्राज्ञिक हिसाबले बुझाउने प्रयत्न स्वरूप यो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएका हौं ।’ अनुमानको भरमा कुतर्क गर्नेभन्दा यथार्थ बुझेरमात्र बोल्ने आधारका रूप पुस्तक प्रकाशन गरिएको आङबुङले दाबी गरे ।
प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ १३:१०
पहिले पार्टीको महाधिवेशन, अनि मात्रै आमनिर्वाचन : सिंह
काठमाडौँ — कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले पहिले पार्टीको महाधिवेशन गरेर छिट्टै आमनिर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन् । पार्टीमा महाधिवेशन स्थगित गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्नुपर्ने बहस चलिरहेका बेला नेता सिंहले आमनिर्वाचनभन्दा पहिले पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अहिले संसद्को जुन अवस्था छ, यो ठीक छैन । अब फ्रेस म्याण्डेड लिनुपर्छ । तर त्योभन्दा अगाडि कांग्रेसको महाधिवेशनचाहिँ समयमा हुनुपर्छ,’ नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले भने, ‘नत्र सत्तामा जाने एक जना, त्यसको लाभ लिने एक थरी । अनि त्यसको जवाफ हामीले दिनुपर्ने, त्यस्तो कहाँ हुन्छ ? त्यसैले बेलैमा महाधिवेशन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ ।’
उनले १४ औँ महाधिवेशनमा पार्टीका कार्यकर्ताले गलत नेतालाई चुनेको अवस्थामा भविष्य अन्धकारमा पर्ने बताए । ‘१४ औं महाधिवेशनमा तपाईंहरुले गलत नेतालाई चुन्नुभयो भने भविष्य अन्धकारमा जान्छ । १३ औं महाविधेशनपछि नेतृत्वले काम गर्न सकेन । अहिले डेमोक्रेसी धब–धब भइसकेको छ । राम्रो नेतृत्व नहुँदा डेमोक्रेसी घिडघिडे अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने । नेता सिंहले कांग्रेसमा अब नेतृत्व लिनका लागि नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको बताए ।
‘म शेरबहादुर दाइलाई सम्मान गर्छु । उहाँ सिनियर लिडर हो । रामचन्द्र दाइलाई पनि सम्मान गर्छु । तर मैले उहाँहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा भेटेर भनेको छु– म बाहिर आइसकेँ भनेर,’ उनले भने, ‘तपाईंहरुले सम्मानपूर्वक तरिकाले छाडिदिँदा राम्रो हुन्छ भनिसकेको छु ।’
नेता सिंहले बहुदल स्थापनापछि एउटै व्यक्तिहरु निरन्तर नेतृत्वमा हुँदा देश र जनताले अपेक्षाकृत परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको बताए । ‘बहुदल आएको यतिका वर्ष भइसक्यो । खै त देशले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार देशको अवस्थामा के परिवर्तन भयो र ? के कांग्रेस ? के कम्युनिष्ट ? बहुदल आइसकेपछि मिलिजुलीको राजनीति चलेको छ,’ उनले भने, ‘अब यो पुस्ताले छाड्नुपर्छ । अर्को पुस्ता आइसक्यो । उहाँहरु रिटायर्ड हुनुपर्छ ।’
नेता सिंहले कांग्रेसमा आफूलाई राजकुमार भनिदिने गरेकोमा आपत्ति जनाए । ‘मलाई कसै–कसैले राजकुमार भन्दा रहेछन् । म के को राजकुमार ? पार्टीमा कोही राजकुमार होला । तर म त्यो स्टाटसमा छैन । मैले कांग्रेसको एउटा साधारण कार्यकर्ताले जुन दुःख भोगेर आएको छ ।म त्यसको भुक्तभोगी छु । मैले त्यो सबै दुःख कष्ट भोगेर आएको छु,’ नेता सिंहले भने, ‘गणेशमान–मंगलादेवीको छोरा हुन सजिलो छैन । मैले त प्रतिबन्धित अवस्थामा पुलिस थाना र डण्डा खाएको छु । लाठी खाएको छु । बेञ्च बोकेको छु, भर्‍याङ बोकेको छु । वाल पेन्टिङ गरेको छु । मैले सबै किसिमको दुःख कष्ट भोगेको छु ।’
उनले आफूले गणेशमानको नाम बेचेर राजनीति गर्न नचाहेको दाबी गरे । ‘म केन्द्रीय राजनीति बाबुको नामबाट चल्दैन भनेर पहिलेदेखि पार्टीमा लागेको मान्छे हुँ । म पार्टीको जिल्ला सभापति हुँदै काम गरेर आएको हुँ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ १३:०७